ဘာသာပြန် | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: ဘာသာပြန်
မှန်တစ်ချပ်ရဲ့ ဟိုဖက်ခန်းမှာ ပြောင်းပြန်စကြဝဠာတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒီ စကြဝဠာမှာ သူရူးတွေက သူကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ အရိုးတွေက မြေကြီးအောက်ကနေ ကုပ်တွယ်ထွက်လာပြီး အချစ်ရဲ့ ပထမဆုံးသော အကျိအချွဲအဖြစ် ယုတ်လျော့ ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ညနေဘက်ကျမှ နေက စထွက်တယ်။
အသက်တစ်ရက် ထပ်ငယ်ရလို့ဆိုပြီး ချစ်သူတွေ ငိုကြွေးကြတယ်။ မကြာခင်မှာ သူတို့ရဲ့ အပျော်တွေကို ငယ်ဘဝက အပြီးအပိုင် ယူငင် ရုပ်သိမ်းသွားတော့မှာလေ။
အဲသလို ကမ္တာ္ဘမျိုးမှာ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေ သိပ်များတယ်။ အင်းလေ၊ အဲဒီဝမ်းနည်းခြင်းဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့ …
The Childhood of an Equestrian (1973)
(အရုပ်လုပ်သူ – မောင်ဒေး။ မေ၊ ၂၀၁၇။ Black Swan Publishing.)
Selected Poems of Russell Edson)
Categories: Kabyarz, Prose Poetry | Tags: ဘာသာပြန်, Kabyarz, maung day, prose poetry, the toy maker | Permalink.
ဖြစ်နေကျ ပုံစံကြီး (​မောင်​​ဒေး)
မိန်းမတစ်ယောက်က အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားတယ်။
ငါတော့ ဒါမျိုး ထပ်ကြုံရပြီဆိုပြီး အဘိုးကြီးက အော်ငိုတယ်။ ပြီးတော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေဆိုပြီး သက်ပြင်းကိုချ၊ မိန်းမရဲ့နို့ကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံလိုက်တယ်။
မိန်းမကတော့ ကလေးရလို့ ပျော်နေတယ်။ အသက်ကြီးတဲ့ကလေး ဆိုသော်လည်းပေါ့လေ။
တစ်ယောက်ယောက်က တကယ့်ကလေးကို ထားရမယ့်နေရာမှာ အဘိုးကြီးကို မှားပြီး ထားခဲ့တာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ကလေးက ကြီးရင့်လွန်းနေတယ် ဆိုတာကို သူတို့ တွေ့တော့ ဒီမိန်းမအတွက်က ဒီလောက်ဆို ရပြီ။ တကယ်ဆို ဘာနဲ့မှတန်တဲ့မိန်းမ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး သူတို့ ပြောကြပါတယ်။
မိန်းမက တွေးတယ်။ အဖေအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ကလေးကို ရထားတဲ့ မိခင်ဆိုရင် သူတစ်ယောက်တည်းပဲလား၊ နောက်ထပ် ရှိသေးလားပေါ့။
What A Man Can See (1969)
(အရုပ်လုပ်သူ – မောင်ဒေး။ မေ၊ ၂၀၁၇။ Black Swan Publishing.
၁၉၉၀ အထူးသီးသန့်​ (သီဟသူ)
ဟင့်​အင်း၊ အဲဒါ ကျုပ်​ရဲ့​ကြောင်​ပါ၊
( Charles Bukowski ရဲ့ 1990 special မြန်​မာပြန်​ – သီဟသူ။)
Categories: Kabyarz | Tags: ဘာသာပြန်, သီဟသူ, Charles Bukowski, Thihathu | Permalink.
အိုး၊ ရက်​စ် (သီဟသူ)
ဖြစ်​ရတာထက်​ ပိုဆိုးတဲ့အရာ​တွေ အများကြီး
ဒါ​ပေမဲ့ ဆယ်​စုနှစ်​​ပေါင်းများစွာ ကြာတယ်​
( Charles Bukowski ရဲ့ oh, yes မြန်​မာပြန်​ – သီဟသူ။)
​နောက်​ပြီး ရှာ​တွေ့ရင်​​တောင်​မှ ခင်​ဗျား ယုံမှာမဟုတ်​
( Charles Bukowski ရဲ့ secret laughter မြန်​မာပြန်​ – သီဟသူ။)
Categories: Kabyarz | Tags: ဘာသာပြန်, သီဟသူ, Charles Bukowski, Kabyarz, Thihathu | Permalink.
လှပသောအရာများနှင့် နက်နဲသိမ်မွေ့သောအရာများအကြောင်း (​မောင်​​ဒေး)
…. ​​သူ့ရဲ့ကဗျာ​တွေဟာ (၁) ရယ်​စရာ​ကောင်းတယ်​၊ ရွှင်​တယ်​။ (၂) ကိုယ်​​ရေးရာဇဝင်​ ဆန်​တယ်​။ (၃) အ​ကြောင်းကိစ္စ​တွေရဲ့ ​ရှေ့​နောက်​မညီညွတ်​မှု​တွေ ယှဉ်​တွဲတည်​ရှိ​နေတာကို ပြပြီး အတွင်းပဋိပက္ခကို ​ဖော်​ထုတ်​တယ်​။ ကျွန်​​တော်​ သူ့ကိုကြိုက်​တာမှာ ရွှင်​တာက အ​ကြောင်းတစ်​ချက်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ….
အသိပညာဟာလှတယ်၊ နားလည်သဘောပေါက်မှုက နက်နဲသိမ်မွေ့တယ်။
ရုရှားနိုင်ငံမှာ ရထားခရီးစဉ်တစ်ခုဟာ ဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။
ရှီကာဂိုမြို့ကို ရထားနဲ့သွားတာဟာ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်တယ်။
ဘေးဒုက္ခဆိုးတွေအကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်တယ်။
Categories: Kabyarz | Tags: ​မောင်​​ဒေး, ဘာသာပြန်, david lehman, hallucination is poetry, Kabyarz, maung day | Permalink.
နံရံကို ကျွန်​မ ​ခေါင်းနဲ့ ဝင်​​ဆောင့်​ပစ်​ခဲ့တယ်​ (​​မောင်​​ဒေး)
…. ​နောက်​တစ်​ခု သတိထားမိတာက​တော့ သူ့ကဗျာ​တွေထဲမှာ ပုဂ္ဂလဓိဌာန်​နဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်​ဟာ ပူးချည်​ခွာချည်​ ဖြစ်​​နေတာ။ တစ်​ခါတစ်​ခါမှာ လှိုက်​လှိုက်​လှဲလှဲ ဖွင့်​ဟဝန်​ခံသလို ဖြစ်​​နေပြီး တစ်​ခါတစ်​ခါမှာကျ​တော့ သူ့ကိုယ်​သူ အ​ဝေးက​နေ ခွာကြည့်​တယ်​။ ….
Categories: Kabyarz | Tags: anna swir, ​မောင်​​ဒေး, ဘာသာပြန်, hallucination is poetry, Kabyarz, maung day | Permalink.
…. ​ဒါ​ပေမယ့်​ ကဗျာက အရာဝတ္ထု​တွေနဲ့ ဘာသာစကားကြားက ဆက်​သွယ်​ချက်​ကို ​ပြောင်းလဲ​ပေးပြီး ကမ္ဘာသစ်​ရဲ့ ပုံရိပ်​ကို ဖန်​တီး​ပေးနိုင်​တယ်​။ ကဗျာနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး သီအိုရီထုတ်​ရတာဟာ အချစ်​အ​ကြောင်း ​ပြောရတာလိုပါပဲ။ ရှင်းပြလို့မရတဲ့ အရာ​တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်​။ ကမ္ဘာကို ဖန်​တီးထားတာ နားလည်​ဖို့မဟုတ်​၊ ရှုမှတ်​ဆင်​ခြင်​ဖို့နဲ့ ​မေးခွန်းထုတ်​ဖို့သာဖြစ်​တယ်​လို့ (အဒိုးနိစ်​က) ​ပြောခဲ့ပါတယ်​။ ….
မြက်​ပင်​နဲ့ ပန်းမာလာ အငုံအဖူးတို့ရဲ့ အကျဉ်းစံ ငါက
ကမ်းစပ်​က သစ်​ကိုင်း​တွေကို ယှက်​​ဖောက်​ပြီး
ကျွန်းတစ်​ကျွန်းကို စိတ်​ထဲမှာ ​ဆောက်​တယ်​။
Categories: Kabyarz | Tags: adonis, ​မောင်​​ဒေး, ဘာသာပြန်, hallucination is poetry, Kabyarz, maung day | Permalink.